ဖြစ်ရပ်မှန်များကို အခြေခံ၍ ကြောက်စရာကောင်းသော ရုပ်ရှင်ငါးကား - iHorror
ပင်မစာမျက်နှာ	ထိတ်လန့်ဖျော်ဖြေရေးသတင်း	ဖြစ်ရပ်မှန်များကို အခြေခံ၍ ကြောက်စရာကောင်းသော ရုပ်ရှင်ငါးကား
ဖြစ်ရပ်မှန်များကို အခြေခံ၍ ကြောက်စရာကောင်းသော ရုပ်ရှင်ငါးကား
by Austin R. German ဇြန္လ 22, 2022
by Austin R. German ဇြန္လ 22, 2022 32,202 အမြင်များ
စစ်မှန်သောဇာတ်လမ်းများအပေါ်အခြေခံပြီးထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စေသောရုပ်ရှင် ၁၅ ခု
ပေါက်ပေါက်စားရင်းနဲ့ ပရိတ်သတ်ကို ဇာတ်ရုံထိုင်ခုံတွေထဲ ဘာတွေဆွဲခေါ်သွားတာလဲ။ အယူအဆတစ်ခုကတော့ စကားစု၊ "ဖြစ်ရပ်မှန်ကိုအခြေခံ၍". နာမည်ဆိုးနဲ့ကျော်ကြားတဲ့ franchise အတွက်အသုံးပြုခဲ့တဲ့ ထုတ်ပြန်ချက်၊ တက္ကဆက် Chainsaw သတ်ဖြတ်မှု. Tobe Hooper ၏ လက်ရာသည် လျော့ရဲတင်းတင်း အခြေခံထားသည်။ လူသတ်သမား Ed Geinဒါပေမယ့် အမှန်တော့၊ တက္ကဆက်မှာ တကယ့် ဆွဲကြိုးကိုင်တဲ့ အရူးအမူး ဒါမှမဟုတ် လူသားစားတဲ့ မိသားစုမျိုး မရှိဘူး (အနည်းဆုံးတော့ ငါ့အသိမဟုတ်ဘူး)။ သို့သော် အောက်ပါတို့သည် တကယ့်ဖြစ်ရပ်များကိုအခြေခံ၍ ကြောက်စရာကောင်းသော ထိတ်လန့်စရာဇာတ်ကားငါးကားဖြစ်သည်။
2012 တွင် Sam Raimi ကို ထုတ်လုပ်ခဲ့သည်။ ပိုင်ဆိုင်မှု ရုပ်ရှင်ရုံများတွင် ရုံတင်ပြသခဲ့သည်။ ဒီဇာတ်ကားကို Ole Bornedal က ရိုက်ကူးထားပြီး Jeffrey Dean Morgan၊ Natasha Calis၊ Matisyahu နဲ့ Madison Davenport တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။
ညီအစ်မနှစ်ယောက်သည် တနင်္ဂနွေအားလပ်ရက်တွင် ဖခင်နှင့်အတူ ကုန်ဆုံးသောအခါ မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးကို ရှေးဟောင်းသေတ္တာတစ်ခုမှ ဆွဲဆောင်သည့် ခြံဝင်းတစ်ခုတွင် စျေးရောင်းရင်း ရပ်သွားကြသည်။ သူ့အဖေက သူ့သမီး အမ်မလီအတွက် သေတ္တာတစ်လုံးဝယ်ပြီး အထဲမှာ ဘာတွေပါနေလဲ မသိ။ သူမသေတ္တာကိုဖွင့်ပြီးသည်နှင့်သူမသည်မကောင်းဆိုးဝါး 'Dybbuk' ဝိညာဉ်ကိုထုတ်လွှတ်ပြီး၎င်းသည်သူမကိုပိုင်ဆိုင်သည်။ နှစ်များတစ်လျှောက် ထင်ကြေးနှင့် လှောင်ပြောင်မှုများသည် ရုပ်ရှင်ကို လှုံ့ဆော်ပေးသည့် ဇာတ်လမ်းကို ဝန်းရံထားသည်။
2004 ခုနှစ် ဇွန်လတွင် Los Angeles Times အတွက် ရေးသားခဲ့ပြီး Leslie Gornstein သည် "Jinx inaBox" ဟူသော ဆောင်းပါးကို ရေးသားခဲ့သည်။ ဤဇာတ်လမ်းအကျဉ်းသည် eBay တွင်တွေ့ရှိခဲ့သော သရဲခြောက်သေတ္တာကို အခြေခံထားခြင်းဖြစ်သည်၊ Dybbuk Box. eBay စာရင်းအရ အဆိုပါပစ္စည်းကို 2001 ခုနှစ်တွင် ကွယ်လွန်သွားခဲ့သော Holocaust အသက်ရှင်ကျန်ရစ်သူထံ ပြန်လည်ခြေရာခံခဲ့သည်။ ရောင်းချသူ Kevin Mannis သည် ၎င်းကို အိမ်ခြံမြေရောင်းပွဲတွင် ကောက်ယူခဲ့သည်။
Mannis ၏အဆိုအရ Dybbuk Box တွင် 1920 pennies နှစ်ခု၊ ရွှေရောင်နှင့် အညိုရောင်ဆံပင်သော့နှစ်ချောင်း၊ ရုပ်တု (Dybbuk)၊ ဝိုင်ခွက်၊ Rosebud ခြောက်တစ်ထည်နှင့် ရေဘဝဲခြေထောက်များရှိသော ဖယောင်းတိုင်တစ်ချောင်းပါ၀င်ပါသည်။ Mannis က ဂျူးရိုးရာပုံပြင်အရ၊ Dybbuk သည် အသက်ရှင်နေထိုင်လိုသော စိတ်အညစ်အကြေးများဖြစ်သည်။
မွေးနေ့အတွက် သူ့အမေကို ဘောက်စ်ပေးပြီးနောက် ချက်ချင်း လေဖြတ်သွားခဲ့သည်။ Mannis သည် ၎င်းကို eBay တွင် စာရင်းသွင်းထားသော box ကို ကြောက်သည်။ ပိုင်ရှင်အသစ်တစ်ဦးသည် ယခု Dybbuk Box ကို လက်ဝယ်ပိုင်ဆိုင်ခဲ့သည်။ Jason Haxton အမည်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦးသည် ထိုပစ္စည်းကို ဝယ်ယူခဲ့သည်။ သူသည် ပြတိုက်တာဝန်ခံနှင့် ဘာသာရေးဆိုင်ရာ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းများ စုဆောင်းသူဖြစ်သည်။ အရာဝတ္ထုနှင့် အတူ ရှိနေစဉ် ၂၀၁၁ ခုနှစ်တွင် “The Dybbuk Box” စာအုပ်ကို ရေးသားခဲ့သည်။ စာအုပ်ကို ထုတ်ဝေနေချိန်တွင် Haxton က သူသည် ချောင်းဆိုးသည့် မိနစ်များကို စတင်ခံစားခဲ့ရကြောင်း ရှင်းပြသည်။ ပုံမှန်အားဖြင့် ချောင်းဆိုးလျှင် သွေးထွက်တတ်ပြီး အရေပြား ယားယံတတ်သည်။ ဒီဇာတ်ကားရဲ့ ဟောပြောချက်ဟာ ပျံ့လွင့်နေချိန်မှာ Haxton က ငြင်းဆိုခဲ့တဲ့ Raimi ထံ သေတ္တာကို ကမ်းလှမ်းခဲ့ပါတယ်။
မီးများပေါက်ကွဲခြင်းကဲ့သို့သော ထူးဆန်းသည့်ဖြစ်ရပ်များ ဖြစ်ပွားခဲ့ပြီး ဂိုဒေါင်မီးလောင်မှုတွင် ရုပ်ရှင်အသုံးအဆောင်အများစု ပျက်စီးသွားကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင် သတင်းရရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ Haxton သည် Rabbis အဖွဲ့မှ ကောင်းချီးပေးပြီး တံဆိပ်ခတ်ထားသော သေတ္တာကို ရရှိခဲ့သည်။ Haxton သည် ထူးဆန်းသောကျော်ကြားမှုများမှ Zak Bagans သည် Dybbuk Box ကို စိတ်ဝင်စားပြီး Haxton ထံမှ ဝယ်ယူသည်အထိ ၎င်းကို မြေအောက်၌ မြှုပ်နှံခဲ့သည်။
Bagans မှ box ကိုဝယ်ယူပြီးရုပ်ရှင်ထွက်ရှိပြီးနောက် Kevin Mannis ကသူသည်ဇာတ်လမ်းတစ်ခုလုံးကိုဖန်တီးခဲ့သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ဒါတွေအားလုံးက အတုတွေချည်းပဲ။ လူနှစ်ဦးစလုံး၊ Mannis နှင့် Haxton တို့သည် ရုပ်ရှင်ထဲမှ ငွေရှာခဲ့သော်လည်း ခါးသီးသောပြိုင်ဆိုင်မှုတစ်ခု စတင်ခဲ့သည်။ Haxton သည် Mannis ကို သဘောမတူဘဲ Mannis သည် စိတ်ကူးယဉ်ဇာတ်လမ်းကို ဖန်တီးခဲ့လျှင်ပင် အဆိုပါအမျိုးသားသည် Kabbalah ကို အသုံးပြု၍ ၎င်းကို ကျိန်ဆဲခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။ 2019 ခုနှစ်တွင်၊ The Inquirer သည် Mannis ၏ ဇာတ်လမ်း၏ လွဲမှားမှုကို အပြည့်အ၀ ဝန်ခံပြီး ဒဏ္ဍာရီကို သူကိုယ်တိုင် ပုံဖော်ထားသည့်ပုံများကို ပြသကာ ၎င်းတို့၏သံသယများကို ရေးသားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း Haxton သည် လူသိရှင်ကြား ထုတ်ဖော်ပြသမှုများ ပိုမိုပြုလုပ်ခဲ့ပြီး မီဒီယာများသို့ အမြဲရောက်ရှိခဲ့သည်။ သူက “Kevin Mannis က နောက်ခံဆူညံသံမျှသာ။ Kevin ထက် ပိုကြီးတဲ့ သေတ္တာထဲမှာ တစ်ခုခုရှိနေတယ်။”
2018 ခုနှစ် Ghost Adventures ဇာတ်လမ်းတွဲတွင် ပုဂံ၏သူငယ်ချင်း ဂီတပညာရှင် Post Malone ကို ထိခိုက်ခဲ့သည်။ ဇာတ်လမ်းတွဲတွင်၊ Malone သည် တစ်ခန်းတည်းတွင်ရှိနေစဉ် Zak Bagans သည် Dybbuk Box ကိုဖွင့်သည်။ Bagans သည် အရာဝတ္တုကို ထိသော်လည်း Malone သည် Zak ၏ ပခုံးပေါ်တွင် သူ့လက်ကို ကိုင်ထားသည်။
အထက်ဖော်ပြပါ ဗီဒီယိုအချို့ကို ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ သတင်းများအရ နှစ်လအကြာတွင် Malone သည် ၎င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဂျက်လေယာဉ်၏ဘီးများ ပျံသန်းစဉ်တွင် ပျက်စီးသွားသောအခါ အရေးပေါ်ဆင်းသက်ခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ ဒါတင်မကသေးဘဲ ကားတိုက်ခံရပြီး သူ့ရဲ့နေထိုင်မှုဟောင်းကို ဖြိုဖျက်ခဲ့ပါတယ်။ Bagans က "Dybbuk Box မှာ ဒီ့ထက် အများကြီးရှိသေးတယ်လို့ ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ သူ့ရဲ့မူလက ဘယ်လိုပဲဖြစ်နေပါစေ၊ ကျိန်စာသင့်ပြီး ဆိုးသွမ်းလွန်းတယ်" Zak က ဆက်လက်ပြီး “ဒီထက်ပိုပြီး အငြင်းပွားမှုတွေနဲ့ ပဋိပက္ခတွေ ဆက်ဖြစ်လာတာကို ကျွန်တော် မအံ့သြပါဘူး။ Dybbuk Box သည် အမြဲလိုလို မေးခွန်းများနှင့် ခြေပုန်းခုတ်နေပါသည်။ ပြီးတော့ ဒါက သူ့ရဲ့ဇာတ်ကြောင်းကို ထပ်လောင်းပေးတယ်။”
Dybbuk Box ကိုသင်ကြည့်ရှုနိုင်ပြီး Nevada၊ Las Vegas ရှိ Zak Bagans သရဲခြောက်ပြတိုက်တွင်သင်ကိုယ်တိုင်ဆုံးဖြတ်ပါ။ RIP ခရီးစဉ်ကို အကြံပြုလိုပါတယ်။ စွဲမက်ဖွယ်ဇာတ်ကား ပိုင်ဆိုင်မှုPrime၊ Vudu၊ Apple TV နှင့် Google Play တို့တွင် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုရန် ရနိုင်သည်။
4. The Hills Have Eyes (၁၉၇၇၊ ၂၀၀၆)
1972 ခုနှစ်တွင် Wes Craven သည် ၎င်း၏ The Last House on the Left ဇာတ်ကားဖြင့် ပရိသတ်များကို တုန်လှုပ်စေခဲ့သည်။ ၎င်း၏နောက်ဆက်တွဲရုပ်ရှင် The Hills Have Eyes သည် ပြဇာတ်ရုံကို နှစ်သက်သူများအတွက် တစ်ဖန် ကွဲပြားစေခဲ့သည်။
ဒီဇာတ်ကားမှာ Susan Lanier၊ John Steadman၊ Janus Blythe၊ ဒဏ္ဍာရီဆန်ဆန် Dee Wallace နဲ့ အထင်ကရ Michael Berryman တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားပါတယ်။ တကယ်တော့ Berryman သည် ရုပ်ရှင်ပိုစတာများတွင် ထင်ရှားစွာပြသခဲ့သည်။ ဒီဇာတ်ကားထဲမှာ မိသားစုတစ်စုဟာ ကယ်လီဖိုးနီးယားကိုသွားရင်း နီဗားဒါးသဲကန္တာရကိုဖြတ်ပြီး ခရီးထွက်နေပါတယ်။ ဆူညံနေသော ဓာတ်ဆီဆိုင်တွင် ရပ်တန့်ပြီးနောက် သူတို့၏ကားသည် မည်သည့်နေရာမှ ပျက်သွားခဲ့သည်။ နာရီတွေကြာလာတာနဲ့အမျှ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်တဲ့ လူသားစားတဲ့ကောင်တွေက သူတို့ကို အမဲလိုက်ဖို့ စတင်လာပါတယ်။
2006 ခုနှစ်တွင် remake သည်အစိမ်းရောင်အလင်းဖြစ်ခဲ့သည်။ Alexandre Aja သည် ဒါရိုက်တာတာဝန်များကို ထမ်းဆောင်ခဲ့ပြီး Craven သည် ဇာတ်ညွှန်းကို ကြီးကြပ်ခဲ့သည်။ Ted Levine၊ Dan Byrd၊ Kathleen Quinlan၊ Aaron Stanford၊ Tom Bower နှင့် Laura Ortiz တို့သည် ဤသွေးထွက်သံယို အူကြောင်ကြောင် ပြန်ပြောခြင်းတွင် ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ခဲ့ကြသည်။ ပြန်လည်ရိုက်ကူးမှုတွင် အရင်းအမြစ်အကြောင်းအရာကို ဂုဏ်ယူစွာဖြင့် ကိုင်တွယ်ခဲ့ပြီး ပစ်ခတ်မှုနှင့် အကြမ်းဖက်မှုများကို မြှင့်တင်ခဲ့သည်။ ရုပ်ရှင်နှစ်ကား၏ တစ်ခုတည်းသော ထင်ရှားသော ခြားနားချက်မှာ '77 ရုပ်ရှင်တွင်၊ လူသားစားသော မျိုးကွဲများသည် နျူကလီးယား ဖောက်ပြန်မှုမှ ဗီဇပြောင်းလဲခြင်းမှ မဟုတ်ဘဲ၊ ၂၀၀၆ ခုနှစ် ဇာတ်ကားတွင် မိုင်းတွင်းလုပ်သားများအဖြစ် တောကောင်များကို ပြသခဲ့သည်။ သို့သော် Mojave သဲကန္တာရတွင် အမှန်တကယ် မွေးရာပါ လူသားစားသည့် မိသားစုတစ်ခု ရှိပါသလား။ မရှိပေမယ့် 2006 Scotland မှာ မိသားစုတစ်ခုရှိခဲ့ပါတယ်။
1719 ခုနှစ်တွင် အလက်ဇန္ဒားစမစ်က “နာမည်ဆိုးဖြင့်ကျော်ကြားသော အဝေးပြေးသမားများ၏ ဘဝများနှင့် လုယက်မှုများ၏ ပြီးပြည့်စုံသောသမိုင်းကြောင်း” ရေးခဲ့သည်။ ဤရွေးချယ်မှုတွင်၊ မြောက်ဘက်ရေလက်ကြားမှ လမ်းသစ်ကိုဖြတ်၍ မြင်းစီးလာသော လင်မယားနှစ်ယောက်ပုံပြင်ကို ဖတ်ရသည်။ ခင်ပွန်းသည် တောရိုင်းရိုင်းစိုင်းသော ရိုင်းစိုင်းသော လုပ်ရပ်ကြောင့် ၎င်းတို့ တိုက်ခိုက်ခြင်းခံခဲ့ရသည်။ ဇနီးသည်က မလွတ်မြောက်ခဲ့သော်လည်း ခင်ပွန်းသည် အသက်ရှင်ကျန်ရစ်ခဲ့သည်။ ဘုရင်မင်းမြတ်သည် လူပေါင်း ၄၀၀ ကို စေလွှတ်ပြီး ထိုအကောင်များကို ရှာဖွေရန် ကြိုးစားခဲ့သည်။ သူတို့တွေ့ရှိခဲ့တာတွေက သူတို့ကို ထာဝရ သရဲခြောက်စေတယ်။
လှိုဏ်ဂူတစ်ခုအတွင်းတွင် သူ၏ဇနီးဖြစ်သူ 'Black' Agnes Douglas နှင့်အတူ Sawney Bean အမည်ရှိ အမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်သည်။ ၎င်းတို့သည် မွေးမြူ၊ အမဲလိုက်၊ ပေါင်းသင်းနေထိုင်သည့် မိသားစုဝင် ၅၀ နီးပါးအထိ ပေါက်ဖွားခဲ့သည်။ ၎င်းတို့ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သော အမျိုးသားများသည် ကြောက်လန့်သွားကြသည်။ ဆေးရွက်ကြီး အရွက်များ သို့မဟုတ် အမဲသား ဖုံးကွယ်နေသကဲ့သို့ အခြောက်ခံကာ ဂူပတ်ပတ်လည်တွင် လူ၏ အသားစများကို ချိတ်ဆွဲထားသည်။ ဂူနံရံများကို ရွှေငွေများဖြင့် အလှဆင်ထားသည်။ သေဆုံးသူများ၏ ပစ္စည်းများ အစုအပုံများနှင့် အမှိုက်ပုံများသည် မြေပြင်ပေါ်တွင် ပြန့်ကျဲနေပါသည်။
ဓားများ၊ လက်စွပ်များ၊ ပစ္စတိုများနှင့် အခြားအ၀တ်အထည်များ မိသားစုကြားတွင် ထိုင်နေပါသည်။ အမျိုးသမီးများသည် ကြိုးဝိုင်းများဖြင့် ဆော့ကစားကြပြီး အမျိုးသားများသည် သွေးနှင့်တူသော အရက်သောက်ကြသည်။ ခဏတာ ထိပ်တိုက်ရင်ဆိုင်ပြီးနောက်၊ 400 အုပ်စုသည် Bean မိသားစုကို ဝိုင်းပြီး တရားစီရင်ရန်အတွက် ဘုရင်ထံ ပြန်ပို့နိုင်ခဲ့သည်။
၎င်းတို့သည် အမှန်တကယ် မွေးမြူထားသော လူသားစားသတ္တဝါများဖြစ်ကြောင်း နိဂုံးချုပ်လိုက်သောအခါတွင် ဘုရင်သည် Sawney Bean ကို ခွဲထုတ်ပြီး သူ၏ ခြေလက်များကို ဖယ်ရှားရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ယင်းတွင် ခြေနှစ်ဖက်နှင့် လက်များ ပါဝင်သည်။ ပြစ်ဒဏ်သည် Bean မိသားစုရှိ အမျိုးသားများအားလုံးလည်း အကျုံးဝင်မည်ဖြစ်သည်။ Sawney အပါအဝင် လူတစ်ဦးစီသည် အသေသတ်ပစ်ခဲ့သည်။ Agnes နှင့်အတူ အမျိုးသမီးများနှင့် ကလေးငယ်များအားလုံးကို ဘုရင်က လူသားဆန်မှုအပေါ် ရာဇ၀တ်မှုဟု သတ်မှတ်သည့်အတွက် လောင်းကြေးတွင် အရှင်လတ်လတ် မီးရှို့ခံခဲ့ရသည်။ ဒါပေမယ့် Bean ရဲ့ အပြုအမူနဲ့ နေထိုင်မှုပုံစံကို ဘုရင်တွေရဲ့ အုပ်ချုပ်မှုနဲ့ နှိုင်းယှဉ်ရင် ဘာက ကွာခြားသွားတာလဲ။ ဒါက Craven ကို လှုံ့ဆော်ပေးတဲ့အရာပါ။
“ဒါပေမယ့် အဲဒါကိုကြည့်ရင်၊ သူတို့က သူတို့ကို ဖမ်းမိတဲ့အခါ လူ့ယဉ်ကျေးမှုထက် ပိုဆိုးတဲ့ ဘာမှ မလုပ်ပါဘူး၊” ဟု Wes Craven က 1977 ခုနှစ်တွင် ရှင်းပြသည်။ “နောက်ပြီး A/B က ဘယ်လို ယဉ်ကျေးမှုကြီးလဲလို့ တွေးလိုက်မိတယ်။ အယဉ်ကျေးဆုံးက ဘယ်လို အရက်စက်ဆုံး ဖြစ်နိုင်သလဲ၊ အရက်စက်ဆုံးက ဘယ်လို ယဉ်ကျေးနိုင်မလဲ။ ဒီမိသားစုနှစ်စုကို တစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက် မှန်တစ်ချပ်အဖြစ် တည်ဆောက်ခဲ့တယ်။ ကိုယ့်ကိုကိုယ်ကြည့်ရတာ၊ အကောင်းအတွက်တင်မကဘဲ ကြီးကျယ်တဲ့အဆိုးအတွက်ပါ အရည်အချင်းရှိတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို တွေးကြည့်ရတာ အရမ်းစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းပါတယ်။”
Sawney Bean ၏ ဇာတ်လမ်းကို ဆက်လက် သုတေသနပြုကာ ပြန်လည် ရှင်သန်လာသောအခါ မျိုးနွယ်စုသည် ၎င်းတို့ မသတ်မီ အနည်းဆုံး လူတစ်ထောင်ကို စားခဲ့ကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့သည်။ လွန်ခဲ့သည့် 25 နှစ်အတွင်း ခရီးသွားအများအပြား ပျောက်ဆုံးသွားကြောင်း ဘုရင်မင်းမြတ်က အခြားအစီရင်ခံစာများကို အတည်ပြုခဲ့သည်။ ရက်စက်ကြမ်းကြုတ်သော ပြစ်ဒဏ်သည် တရားမျှတပါသလား။ ဤကဲ့သို့သော သွေးထွက်သံယိုနှင့် ရွံရှာဖွယ်ကောင်းသော ဇာတ်ကြောင်းကို လှုံ့ဆော်မှုပေးရန်အတွက် ရုပ်ရှင်နှစ်ကားစလုံးသည် စကော့တလန်ရှိ သရဲခြောက်သောလမ်း၏ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းနှင့် ကိုက်ညီပါသည်။
The Hills Have Eyes(2006) ကို Tubi၊ Prime၊ Google Play၊ Vudu နှင့် Apple TV တို့တွင် တိုက်ရိုက်ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
The Hills Have Eyes (1977) ကို Prime၊ Tubi နှင့် Apple TV တို့တွင် ရရှိနိုင်ပါသည်။
ဒါရိုက်တာ Paco Plaza ၏စွဲမက်ဖွယ်ကောင်းသော စပိန်ရုပ်ရှင် Veronica သည် 2017 ခုနှစ်တွင် Netflix တွင်ပြသခဲ့သည်။ ကြည့်ရှုသူအများအပြားသည် ချက်ချင်းပင် ထိတ်လန့်တုန်လှုပ်သွားကြသည်။ ဇာတ်လမ်းများသည် မည်သည့်ရုပ်ရှင်၏ သာမာန်အခြေအနေများကို ထင်ဟပ်စေသော်လည်း လေထုသည် မှောင်မိုက်နေပါသည်။ သရုပ်ဆောင်မှု ကြမ်းတမ်းသည်။
ကျွန်တော့်ရှေ့က မြင်ကွင်းတွေ လွင့်ပြယ်သွားတာကြောင့် တစ်စက္ကန့်တောင် မကြည့်နိုင်ဘဲ ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်း ပရိသတ်ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်။ ရုံတင်ပြီး ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်အကြာမှာတော့ လူတော်တော်များများက ဒီဇာတ်ကားကို Netflix မှာ ကြောက်စရာအကောင်းဆုံးဇာတ်ကားအဖြစ် Twitter မှာ ချီးကျူးခဲ့ကြပါတယ်။ Veronica သည် Sandra Escacena ၊ Bruna Gonzalez ၊ Claudia Placer ၊ Ivan Chavero နှင့် Ana Torrent တို့၏ ပင်ကိုယ်စွမ်းရည်များကို သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ Paco Plaza မှရေးသားပြီး ဒါရိုက်တာအဖြစ် ရိုက်ကူးထားသည့် ဇာတ်ကားသည် စပိန်နိုင်ငံ မက်ဒရစ်မြို့မှ အသက် 15 နှစ်အရွယ် မိန်းကလေး (Veronica) ကို မှော်အတတ်ပညာကို စိတ်ပါဝင်စားစွာ စတင်လုပ်ဆောင်လာခြင်းဖြစ်သည်။ နေကြတ်နေစဉ်အတွင်း သူမ၏သူငယ်ချင်းဖြစ်သူသည် ဆိုင်ကယ်မတော်တဆမှုကြောင့် သေဆုံးသွားသော ရည်းစားဟောင်းကို ဆက်သွယ်ကူညီပေးရန် နေကြတ်နေစဉ်အတွင်း ကျောင်းသို့ Ouija ဘုတ်ပြားကို ယူဆောင်လာခဲ့သည်။ စွက်ဖက်ပြီး တိတ်တဆိတ် ဆက်ဆံပြီးနောက်၊ Veronica သည် နတ်ဆိုးတစ်ကောင်၏ အပိုင်ဖြစ်လာသည်။ ရုပ်ရှင်ထွက်ပြီးတဲ့အချိန်အထိ အမေရိကန်ပရိသတ်တွေက သရဲခြောက်ခြင်းရဲ့နောက်ကွယ်က ဖြစ်ရပ်မှန်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့ကြပါတယ်။
1990 ခုနှစ်အစောပိုင်းတွင် စပိန်တွင် မိန်းကလေးငယ်တစ်ဦးသည် သူမ၏ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကို ဇောက်ထိုးဖြစ်စေခဲ့သည်။ သူမရဲ့ နာမည်ကတော့ Estefania Gutierrez Lazaro ပါ။ သူမသည် စပိန်နိုင်ငံ၏ အကျော်ကြားဆုံးသော ပိုင်ဆိုင်မှုဇာတ်လမ်း ဖြစ်လာမည်ဖြစ်သည်။ Estefania လူငယ်တစ်ဦးသည် မှော်အတတ်ကို စတင်ယုံကြည်လာပြီး ၎င်းကို စိတ်အားထက်သန်မှုကို ပြသခဲ့သည်။ သူမ၏မိဘများက ၎င်းသည် အဆင့်တစ်ခုမျှသာဖြစ်သည်ဟု ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး သူမသည် ouija ဘုတ်များဖြင့် ဆက်လက်ကစားနေသောကြောင့် ဝင်ရောက်စွက်ဖက်ရန် ဘာမှမလုပ်ဆောင်ခဲ့ပေ။ နွေဦးရဲ့တစ်နေ့မှာ သူမဟာ သေဆုံးသွားတဲ့ ရည်းစားဟောင်းနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်သူနဲ့ စကားပြောရာမှာ ကူညီဖို့ ကျောင်းတက်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
Estefania သည် ထုံးတမ်းစဉ်လာကို စတင်စဉ်တွင် သီလရှင်တစ်ပါးသည် ဆိုင်းဘုတ်ကို နှောင့်ယှက်ကာ ouija ဘုတ်အား ချိုးဖျက်ကာ ကလေးငယ်များကို ဆူပူကြိမ်းမောင်းခဲ့သည်။ ကျိုးပဲ့နေသော အပိုင်းအစများမှ ထူးဆန်းသော အဖြူရောင်မီးခိုးများ လွင့်စင်လာပြီး အက်စတီဖန်းနီးယားမှ မတော်တဆ ရှူရှိုက်မိကြောင်း အက်စတီဖန်းနီးယား၏ သူငယ်ချင်းများက သက်သေခံခဲ့ကြသည်။ နောက်လများ သည် Estefania နှင့် သူမ၏မိသားစုအတွက် ကြောက်စရာကောင်းနေခဲ့သည်။ သူမသည် ညီအစ်ကိုမောင်နှမများကို ဟောင်စပြုလာသည်။ တစ်ပတ်လျှင် အကြိမ်အနည်းငယ်တွင် သူမသည် ဝက်ခြံပေါက်ကာ စင်္ကြံနှင့် အခန်းထောင့်များတွင် လမ်းလျှောက်နေသော အမှောင်ဖုံးထားသော ရုပ်ပုံများအကြောင်း မိဘများထံ အော်ဟစ်ပြောပြသည်။
လာဇာရော့စ်သည် ၎င်းတို့၏သမီးအား ဆရာဝန်များနှင့် အထူးကုများထံ ခေါ်ဆောင်သွားခဲ့သော်လည်း သူမအား အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အရာကို မည်သူမျှ သဘောမတူနိုင်ပေ။ သူမကို စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ ထိခိုက်မှုတစ်ခုခုရှိမှန်း သူတို့သိပေမယ့် မိသားစုအတွက် အဖြေမရှိခဲ့ပါဘူး။ ခြောက်လကြာ သည်းထန်စွာ နာကျင်ကိုက်ခဲမှုနှင့် ဆေးရုံသို့ အများအပြားလာရောက်လည်ပတ်ပြီးနောက်၊ Estefonia သည် ဆေးရုံခုတင်ပေါ်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့ပြီး သေဆုံးရသည့်အကြောင်းရင်းကို မသိရသေးပေ။ မိသားစုသည် အဖြစ်ဆိုးကို ဖမ်းဆုပ်ရန် ကြိုးပမ်းစဉ်တွင် ထူးထူးဆန်းဆန်း အဖြစ်အပျက်များက ၎င်းတို့ကို ဒုက္ခပေးနေဆဲဖြစ်သည်။ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော အော်ဟစ်သံများနှင့် ကျယ်လောင်သော ပေါက်ကွဲသံများသည် သူတို့၏အိမ်အတွင်း၌ ဆက်လက်တည်ရှိနေခဲ့သည်။ Estefania ၏ရုပ်ပုံသည် စင်ပေါ်မှပြုတ်ကျပြီး သူ့ဘာသာသူ လောင်ကျွမ်းသွားသည်။ ယင်းကြောင့် မစ္စတာ လာဇာရိုအား အာဏာပိုင်များထံ ဖုန်းဆက်ရန် လှုံ့ဆော်ခဲ့သည်။ ရဲတွေရောက်လာတော့ Lazaro နေအိမ်ကို ရှာဖွေခဲ့ပါတယ်။ Estefania ၏အခန်းတွင် တိရိစ္ဆာန်တစ်ကောင်ရှိသကဲ့သို့ သူမ၏ပိုစတာများ အားလုံးကို ဆုတ်ဖြဲထားသည်ကို တွေ့ရှိခဲ့သည်။
၎င်းတို့၏ အစီရင်ခံစာတွင် အရာရှိတစ်ဦးသည် ကားစင်ပေါ်မှ နံရံပေါ်မှ ပြုတ်ကျပြီး သဘာဝမကျသော ပုံစံဖြင့် ကွေးသွားသည်ကို တွေ့ရသည်ဟု အရာရှိတစ်ဦးက ပြောကြားခဲ့သည်။ သူတို့ထွက်ခွာသွားစဉ် နောက်ထပ် အံ့သြစရာဖြစ်ရပ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့သည်- အနီရောင်အစွန်းအထင်းတစ်ခုသည် အိမ်တစ်အိမ်လုံးတွင် ၎င်းတို့နောက်သို့ လိုက်လာသည်။ ဤတရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်များသည် Estenfania ၏ဇာတ်လမ်းကို Madrid ၏လူထုအမြင်သို့တွန်းပို့ခဲ့သည်။ သူတို့ပတ်ဝန်းကျင်က မငြိမ်မသက်မှုတွေကို တစ်နှစ်ကျော်ကြာ ကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းပြီးနောက် လာဇရော့စ်တွေ ပြောင်းရွှေ့သွားတယ်။ အသစ်တစ်နေရာမှာ အခြေချနေထိုင်ပြီးနောက်မှာ အစွဲအလမ်းတွေအားလုံး ရပ်တန့်သွားပါတယ်။
“စပိန်မှာဆိုရင် အရမ်းနာမည်ကြီးတယ်” ဟု Plaza တွင်ဖော်ပြထားသည်။ “ဘာလို့လဲဆိုတော့ ရုပ်ရှင်ထဲမှာ ပြောသလိုပဲ၊ ရဲအရာရှိက သူ့မှာ ထူးခြားဆန်းပြားတဲ့ အရာတစ်ခုကို မြင်ဖူးတယ်လို့ ပြောပြီး တရားဝင် ရဲတံဆိပ်တုံးနဲ့ အစီရင်ခံစာကို ရေးထားတယ်။ ဒါပေမယ့် တစ်ခုခုပြောရင် သတင်းမှာတောင် ဇာတ်လမ်းဖြစ်သွားတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။ ဘယ်သူတွေပြောနေလဲပေါ်မူတည်ပြီး အဖြစ်မှန်ဘယ်လောက်ကွာခြားလဲဆိုတာသိဖို့ မတူညီတဲ့သတင်းစာတွေကိုသာ ဖတ်ရမှာပါ”
ရုပ်ရှင်ကို Netflix နှင့် Pluto TV တွင် သင်ကိုယ်တိုင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
2 ။ အဆိုပါ Exorcist (1973)
ဒီဇာတ်ကားကို ပြန်ပြောပြပြီး အယောင်ဆောင်ပြီး တော်တော်များများ ပြောနေကြသလို သင့်ဦးခေါင်းက 360 အပြည့် လည်ပတ်နေမယ်လို့ သင်ယုံကြည်နိုင်ပါတယ်။ သို့ပေမယ့် ဒီဇာတ်ကားရဲ့ အမိုက်စားရုပ်ရှင်ကားကို တကယ်ထိတ်လန့်စရာကောင်းလောက်အောင် မြင့်မားလာအောင် ဘာက တွန်းအားပေးခဲ့တာလဲ။ စာရေးဆရာ William Peter Blatty သည် သူ၏ ကြောက်မက်ဖွယ်ကောင်းသော ဝတ္ထုကို အခြေခံထားသည့် တကယ့်ဖြစ်ရပ်မှန်ကား အဘယ်နည်း။
Ronald Hunkeler ဆိုတဲ့ လူငယ်လေးဆီကို 1949 ကို ပြန်သွားရမယ်။ Ronald သည် သာမန် Maryland ဆင်ခြေဖုံးတွင် နေထိုင်သည်။ ဂျာမန်-လူသာရန်အိမ်ထောင်စုတွင် ကြီးပြင်းလာသူသည် ဤမျှဆိုးရွားသော တစ်စုံတစ်ခုသော တစ်စုံတစ်ရာကို သူ့အတွက် မထင်မှတ်ခဲ့ပေ။ Roland သည် ဝိညာဉ်ရေးဝါဒီတစ်ဦးဖြစ်ပြီး ကြားခံတစ်ဦးဖြစ်သည်ဟု အခိုင်အမာဆိုထားသည့် ၎င်း၏အဒေါ် Harriet နှင့် နက်ရှိုင်းသော တွယ်တာမှုကို ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့သည်။ သူမမသေခင်လေးမှာ Harriet ဟာ သူ့ရဲ့ 13 နှစ်မြောက်မွေးနေ့အတွက် Ronald ကို Ouija Board လက်ဆောင်ပေးခဲ့ပါတယ်။
ဤ “လက်ဆောင်” သည် နောက်ဆက်တွဲ ဖြစ်ပျက်လာပါက မှတ်တမ်းတင်ထားခြင်း သို့မဟုတ် အတည်မပြုနိုင်ပါ။ (အမြဲတမ်း ခန့်မှန်းထားသော်လည်း)။ Ronald သည် ဝမ်းနည်းပူဆွေးမှုကို စတင်ဖြေရှင်းလာသည်နှင့်အမျှ သူ၏အိပ်ခန်းထဲတွင် ထူးခြားသောအဖြစ်အပျက်များကို သူကြုံတွေ့ခဲ့ရသည်။ သူ့မိဘတွေကို နံရံပေါ်မှာ ခြစ်ချသံကြားရပြီး ကြမ်းပြင်ပေါ်မှာ ဘယ်သူမှ မတ်တပ်ရပ်မနေဘဲ အော်ဟစ်နေခဲ့တယ်။ ပိုစိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက သူ့မွေ့ယာကို သူ့ဘာသာသူ ရွှေ့နေတာကို တွေ့လိုက်ရတယ်။ စိုးရိမ်စွာဖြင့်၊ သူ့မိဘများသည် Jesuit တစ်ဦးနှင့် စကားပြောရန် စေလွှတ်လိုက်သော သူတို့၏ လူသာရန် ဝန်ကြီး၏ လမ်းညွှန်မှုကို ရှာဖွေခဲ့ကြသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ 1949 တွင် ဖခင် E. Albert Hughes မှ ပထမဆုံး exorcism ကို ကြိုးစားခဲ့သည်။ တကယ်တော့ သူက Ronald ကို သူ့အိပ်ရာပေါ်မှာ ကြိုးနဲ့ပတ်ပြီး ကောင်လေးနဲ့ အံကိုက်နေချိန်ပါ။ ဒေါသတကြီး ဒေါသတကြီးဖြင့် Ronald သည် သူ၏မွေ့ယာ၏ ဘောက်စ်ပေါက်ပေါက်မှ အပိုင်းအစတစ်ခုကို ချိုးဖျက်ပြီး ဘုန်းတော်ကြီးကို ခုတ်ထစ်ရန် အသုံးပြုခဲ့သည်။ ကောင်လေးသည် ဖခင်၏ရင်ဘတ်တစ်လျှောက် နက်နဲသောအပေါက်အပြဲကို ဖြတ်တောက်နိုင်ခဲ့ပြီး ချွတ်ယွင်းချက်မပြည့်မစုံဖြစ်ခဲ့သည်။
အဲဒီလနှောင်းပိုင်းမှာ Ronald ရဲ့ ခန္ဓာကိုယ်ဟာ ခြစ်ရာတွေ ကွဲအက်သွားခဲ့ပါတယ်။ ဤသွေးစွန်းသော ထွင်းထုမှုများသည် “လူးဝစ်” ဟူသော စကားလုံးကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Hunkelers များသည် Missouri၊ St. Louis တွင် မိသားစုရှိကြပြီး ၎င်းတို့သည် ၎င်းတို့၏သားကို အနောက်ဘက်မုခ်သို့ ခေါ်ဆောင်ရန် နိမိတ်တစ်ခုဖြစ်ကြောင်း ဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြသည်။ ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ Ronald ရဲ့ဝမ်းကွဲဖြစ်သူ စိန့်လူးဝစ်တက္ကသိုလ်မှာ တက်ရောက်နေတာကို တွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။ အစ်ကိုဝမ်းကွဲက Jesuit တွေနဲ့ သူငယ်ချင်းဖြစ်တဲ့ တက္ကသိုလ်ရဲ့ ဥက္ကဌနဲ့ စကားပြောခဲ့ပါတယ်။ သူမသည် သူမ၏ဝမ်းကွဲ Ronald ၏ ရုန်းရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်မှုကို ရှင်းပြခဲ့ပြီး လူငယ်လေးအား စစ်ဆေးရန် Jesuit နှစ်ယောက်ကို စေလွှတ်ခဲ့သည်။
ဖခင် Walter H. Halloran နှင့် Reverend William Bowdern ။ လက်ထောက်ခြောက်ယောက်နှင့်အတူ သန့်ရှင်းသောလူနှစ်ဦးသည် အခြားအဆိပ်အတောက်များကို ကြိုးပမ်းကြမည်ဖြစ်သည်။ 1949 ခုနှစ် မတ်လတွင် အမျိုးသားများသည် တစ်ပတ်ကြာ ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ ဘာမှ အလုပ်မဖြစ်ပုံရပြီး အရာအားလုံး ပိုဆိုးလာသည်။ Ronald သည် ပါးစပ်လေသံဖြင့်ပြောကာ အခန်းတွင်းရှိ အရာဝတ္ထုများသည် သူတို့သဘောအတိုင်း လွင့်မျောနေမည်ဖြစ်သည်။ Bowdern နှင့် Halloran တို့သည် အဖြစ်ဆိုးကြီးတစ်ခုလုံးကို မှတ်တမ်းတင်ထားသော ဂျာနယ်များတွင် သိမ်းဆည်းထားသည်။ Bowdern သည် ကောင်လေး၏ရင်ဘတ်ပေါ်တွင် သွေးစွန်းနေသော X ပုံစံကိုတွေ့လိုက်ရသည့်အတွက် အံ့အားသင့်သွားကာ ကလေးအား နတ်ဆိုး ၁၀ ကောင်ထက်မနည်း ပိုင်ဆိုင်ထားကြောင်း ယုံကြည်သွားခဲ့သည်။ မတ်လ 10 ရက်နေ့တွင် ဘုန်းတော်ကြီးနှစ်ပါးသည် ယောက်ျားလေးအား ဒေါသနှင့် ညစ်ညမ်းစွာ ဆဲဆိုကြိမ်းမောင်းပြီးနောက် ဆရာတော်နှစ်ပါး စွန့်လွှတ်ခဲ့သည်။ ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးက သူ့ကို Alexian Brothers ဆေးရုံမှာ ထားဖို့ မိသားစုက အကြံပြုထားပါတယ်။
သို့တိုင် ရော်နယ်လ်၏ ထူးထူးဆန်းဆန်း အပြုအမူသည် ပိုဆိုးလာသည်။ ယခု သူသည် မည်သည့်ဘာသာရေးပစ္စည်းကိုမဆို အော်ဟစ်နေပေလိမ့်မည်။ သူသည် ဘုရားသခင်ကို ကိုးကွယ်သူတို့ကို ကျိန်ဆဲပြီး စာတန်၏ တန်ခိုးကို အော်ဟစ်ခဲ့သည်။ ဆရာဝန်တွေရော ဘုန်းကြီးတွေရော မိသားစုပါ လုံလောက်ပါတယ်။ တစ်လကြာ တိုက်ပွဲအပြီး ဧပြီလလယ်တွင် နောက်ဆုံးတစ်ကြိမ် ကြိုးစားခဲ့ကြသည်။ ယဇ်ပုရောဟိတ်များသည် ရော်နယ်၏အိပ်ရာကို လက်ဝါးကပ်တိုင်နှင့် ပုတီးများဖြင့် ဝန်းရံထားသည်။ အဓမ္မကျင့်စဉ်တွင် ဖခင် Halloran သည် ကောင်လေးကို အန္တရာယ်ပြုသည့် အမှောင်အင်အားစုများကို မောင်းထုတ်ရန် Saint Michael အား တောင်းဆိုခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးတွင်၊ ခုနစ်မိနစ်အကြာတွင် ရော်နယ်လ်သည် အဖမ်းမခံတော့ဘဲ အိပ်ယာပေါ်၌ လဲကျသွားခဲ့သည်။ ဘုန်းကြီးတွေက ပြီးသွားပြီလို့ အတည်ပြုပြီး ရော်နယ်က “သူသွားပြီ” လို့ ပြောပါတယ်။
ကြောက်စရာကောင်းတဲ့ အဖြစ်အပျက် ပြီးသွားပေမယ့်၊ Ronald ရဲ့ ဇာတ်လမ်းကို William Peter Blatty က 1971 ခုနှစ်မှာ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။ Georgetown တက္ကသိုလ်မှာ ပညာသင်ကြားနေစဉ် ဘုန်းကြီးနှစ်ပါးရဲ့ ဂျာနယ်ကို ရှာဖွေတွေ့ရှိပြီးနောက်၊ Blatty ဟာ Reverend Bowdern ကို ဆက်သွယ်ပြီး စာအုပ်တစ်အုပ် ဆက်ရေးဖို့ သူ့ခွင့်ပြုချက် ရရှိခဲ့ပါတယ်။ 1971 ခုနှစ်တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော စာအုပ်သည် အရောင်းရဆုံး စာရင်းဝင်ခဲ့ပြီး လေးလကြာအောင် စာရင်းဝင်ခဲ့သည်။
ယနေ့အချိန်အထိ အုပ်ရေ ၁၃ သန်းကျော် ရောင်းချခဲ့ရကြောင်း သိရသည်။ 13 ခုနှစ်တွင် ဒါရိုက်တာ William Friedkin သည် ရုပ်ရှင်အကြောင်း Blatty သို့ချဉ်းကပ်ခဲ့ပြီး Blatty မှ ဇာတ်ညွှန်းရေးသားခဲ့သည်။ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် ရုပ်ရှင်နှင့် စာအုပ်တွင် လွတ်လပ်မှုအချို့ကို ရယူထားသော်လည်း ပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများသည် နိုင်ငံတစ်ဝှမ်းတွင် သန်းနှင့်ချီ၍ ထိတ်လန့်နေကြဆဲဖြစ်သည်။ Linda Blair၊ Max Von Sydow၊ Ellen Burstyn နှင့် Jason Miller တို့က အံ့အားသင့်ဖွယ် သရုပ် ဆောင်များဖြစ်သည်။ သို့သော်လည်း ရုပ်ရှင်သည် ဒေါသူပုန်ထပြီး ထိတ်လန့်စေခဲ့သည်။
ပြဇာတ်ရုံများတွင် ဝက်ရူးပြန်တက်ခြင်း သို့မဟုတ် ဖျားနာပြီး စွန့်ပစ်ခြင်းခံရကြောင်း သတင်းရရှိပါသည်။ ဘာသာရေးစိတ်အားထက်သန်သူများသည် Warner Bros ကိုဆန့်ကျင်သည့်လှုပ်ရှားမှုများကိုစတင်ခဲ့ပြီး ရုပ်ရှင်ထွက်ရှိပြီးနောက်တွင် Linda Blair ၏ကိုယ်ရံတော်များရှိကြောင်း ကောလာဟလများထွက်ပေါ်လျက်ရှိသည်။ ဒါပေမယ့် ဒီမငြိမ်မသက်မှုတွေမှာ Ronald Hunkeler က ဘာဖြစ်သွားတာလဲ။
New York Post ၏ အဆိုအရ Hunkeler သည် သာမန်ဘဝဟု အချို့က ယူဆသည့်အတိုင်း နေထိုင်သွားခဲ့သည်။ သာမာန်ဆိုလိုရင်းက NASA မှာ အလုပ်လုပ်နေတာ။ မှန်တယ်… နာဆာ။ Hunkeler သည် အာကာသယာဉ်မှူးဖြစ်မလာသော်လည်း 60s ၏ Apollo မစ်ရှင်များအတွက် ပြင်းထန်သော အပူဒဏ်ကို ခံနိုင်ရည်ရှိသော ပစ္စည်းကို မူပိုင်ခွင့်တင်ခဲ့သည့် လူတစ်စုထဲတွင် သူပါဝင်ခဲ့သည်။ ၂၀၀၁ ခုနှစ်တွင် အငြိမ်းစားယူခဲ့ပြီး တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သော ဘဝနေထိုင်မှုတွင် တိမ်မြုပ်သွားခဲ့သည်။ သူသည် 2001 တွင် ကွယ်လွန်ခဲ့သည်ဟု ယုံကြည်ရသည်။
ဤဂန္ထဝင်သရဲရုပ်ရှင်ရုံကို Netflix နှင့် Google Play တွင် ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။ *ယမန်နှစ်က David Gordon Green (Halloween၊ Halloween Kills၊ Halloween Ends) သည် remake တွင် ပါ၀င်နေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းများထွက်ပေါ်ခဲ့ပါသည်။
မဟုတ်ဘူး၊ ဒါက 2004 ခုနှစ် Elisha Cuthbert ဟာသမဟုတ်ပါဘူး။ Jack Ketchum ရဲ့ ဝတ္ထုကို စိတ်ကူးပုံဖော်ထားတဲ့ ဖြစ်ရပ်မှန်ဇာတ်လမ်းဖြစ်ပြီး နောက်ပိုင်းမှာ ဒီဇာတ်ကားဟာ အတော်လေးကို ကြောက်စရာကောင်းလောက်အောင် ဆိုးရွားပါတယ်။ အဆိုပါမိန်းကလေး Next Door အ 2007 ခုနှစ်တွင် ထွက်ရှိခဲ့သည်။ ၎င်းတွင် Blythe Auffarth၊ William Atherton၊ Blanche Baker နှင့် Kevin Chamberlin တို့ ပါဝင်သရုပ်ဆောင်ထားသည်။ ဒီဇာတ်ကားကို Gregory Wilson က ရိုက်ကူးထားပြီး Ketchum ရဲ့ 1989 ဝတ္ထုကို အခြေခံထားပါတယ်။
အောက်ဖော်ပြပါ ကြေကွဲဖွယ်ဖြစ်ရပ်မှန်သည် ငယ်ရွယ်သောစာဖတ်သူများ (သို့) တုန်လှုပ်ခြောက်ခြားသူများအတွက် မသင့်လျော်ပါ။
Indianapolis၊ Indiana တွင် ၁၉၆၅ ခုနှစ်ဖြစ်သည်။ မိန်းကလေးငယ်နှစ်ဦးကို မိသားစုမိတ်ဆွေတစ်ဦးနှင့် နေထိုင်ရန် စေလွှတ်ခဲ့သည်။ သူတို့ရဲ့ နာမည်တွေကတော့ Slyvia နဲ့ Jenny Likens ပါ။ သူတို့၏မိဘများသည် ပွဲတော်အလုပ်သမားများဖြစ်သည်။ အဲဒီအချိန်မှာ သူတို့အဖေက အလုပ်သွားလုပ်ဖို့ အရှေ့ဘက်ကမ်းမှာ ရှိနေတယ်။ သူတို့အမေက အလစ်သုတ်မှုနဲ့ ထောင်ကျတယ်။ 1965 ခုနှစ် ဇူလိုင်လတွင်၊ Sylvia နှင့် Jenny တို့သည် Likens ကဲ့သို့ ကျောင်းအတူတူတက်ခဲ့သော Gertrude Baniszewski နှင့် သူမ၏သမီးနှစ်ယောက် Paula နှင့် Stephanie တို့နှင့်အတူ နေထိုင်သွားခဲ့သည်။
မစ္စစ် Likens အကျဉ်းထောင်မှ လွတ်မြောက်လာပြီးနောက် သူမသည် မစ္စတာ Likens နှင့် တွေ့ဆုံရန် အရှေ့ဘက်ကမ်းခြေသို့ သွားရောက်ခဲ့ပြီး အလုပ်ပြန်ဝင်ခဲ့သည်။ Gertrude သည် မိန်းကလေးများအား သူမ၏ တစ်ဦးတည်းအဖြစ် ဆက်ဆံခံရမည် ဖြစ်ကြောင်း Likens မှ အာမခံခဲ့ပြီး မိန်းကလေးများ၏ စောင့်ရှောက်မှုအတွက် တစ်ပတ်လျှင် ဒေါ်လာ 20 ပေးချေရမည်ဟု သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့သည်။ Likens သည် နိုဝင်ဘာလတွင် အိမ်ပြန်သည်အထိ ဖြစ်လိမ့်မည်။
ပထမလသည် ကောင်းမွန်ပုံရပြီး Mr. Likens မှ ငွေပေးချေမှုများမှာ အချိန်မှန်ဖြစ်ပြီး ကလေးများသည် Gertrude ၏ကိုယ်ပိုင်ကလေးများနှင့်အတူ ကျောင်းတက်ကြသည်။ လူတိုင်း အဆင်ပြေနေပုံရပြီး Mr. Liken ၏ငွေပေးချေမှုများသည် နောက်ကျမှရောက်လာသည်နှင့် ရုတ်ချည်းပြောင်းလဲသွားသည်။ Gertrude သည် Slyvia နှင့် Jenny ကို စတင်အနိုင်ယူခဲ့သည်။ သူမသည် သူတို့၏ ဘောင်းဘီကို ဆွဲချကာ အဝတ်မပါသော အောက်ခြေများကို ပစ္စည်းမျိုးစုံဖြင့် ရိုက်သည်။ ဩဂုတ်လရောက်သောအခါ၊ Gertrude သည် သူမ၏ဒေါသကို Sylvia တွင်သာ အာရုံစိုက်ရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ဓားပြတိုက်ရန် ကြိုးစားပါက Jenny အား ရိုက်နှက်ခြင်းနှင့် အခြားသော ပြစ်ဒဏ်များဖြင့် ခြိမ်းခြောက်ခဲ့သည်။
တစ်ညနေခင်းတွင် Gertrude သည် သူမ၏သမီးများအား Slyvia ကို အပြစ်ပေးရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Stephanie နှင့် အနီးနားရှိ ကောင်လေး Randy Gordon Lepper တို့နှင့်အတူ Paula သည် သူမအန်မချင်း Slyvia ကို ညစာကျွေးခဲ့သည်။ နောက်တော့ သူတို့ က သူ့ကို ကျောခိုင်းထားတဲ့ အကြွင်းအကျန်တွေကို စားခိုင်းတယ်။ တစ်ပတ်အကြာတွင် ကျောင်းတွင်၊ Slyvia သည် Baniszewski's အကြောင်း ကောလာဟလကို စတင်ခြင်းဖြင့် လက်တုံ့ပြန်ခဲ့သည်။ Baniszewski ညီအစ်မနှစ်ဦးစလုံးသည် ပြည့်တန်ဆာများဖြစ်ကြောင်း သူမက အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုခဲ့သည်။ Stephanie ၏ချစ်သူ Coy Randolph သည် ကောလာဟလကိုကြားသောအခါ၊ သူသည် ကျောင်းပြီးပြီးနောက် Slyvia ကို ရက်ရက်စက်စက် တိုက်ခိုက်ခဲ့သည်။ သူက သူမကို ထပ်ခါတလဲလဲ ထိုးသတ်ပြီး Baniszewski အိမ်ရဲ့ နံရံတွေကို ပစ်ချခဲ့ပါတယ်။
Gertrude သည် ကောလဟာလအကြောင်း သိသွားသောအခါတွင် သူမသည် ကလေးများနှင့် ပူးပေါင်းရန် ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပြီး Slyvia ကို ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်ရန် နည်းလမ်းများကို ကြံဆခဲ့ကြသည်။ သူတို့က Slyvia ကို ရိုက်ပုတ်ပြီး ကန်ကျောက်ပြီး သူ့ကို အစာကျွေးဖို့ လျစ်လျူရှုထားကြတယ်။ မကြာမီ Slyvia သည် သူမရရှိသော ဒဏ်ရာများကို မဖုံးကွယ်နိုင်တော့ဘဲ အိမ်နီးနားချင်းတစ်ဦးမှ ကျောင်းကို အမည်မသိဖုန်းဆက်ခဲ့သည်။ Slyvia နှင့် သူမ၏ညီမတို့သည် ကျောင်းမှအိမ်သို့ လျှောက်သွားသည်ကိုမြင်ပြီး Slyvia ၏ ခန္ဓာကိုယ်ပေါ်ရှိ ဒဏ်ရာများကို တစ်ချက်ကြည့်လိုက်သည်။
ကျောင်းသည် သူနာပြုတစ်ဦးနှင့် ဆရာတစ်ဦးကို စေလွှတ်ခဲ့သော်လည်း Slyvia သည် အဝေးသို့ ထွက်ပြေးခဲ့ပြီး အမြဲတမ်း တစ်ကိုယ်ရေသန့်ရှင်းမှု အားနည်းခဲ့ကြောင်း Gertrude Baniszewski က ပြောကြားခဲ့သည်။ ကျောင်းအရာရှိများ ထွက်ခွာသွားပြီးနောက် Gertrude သည် Slyvia ကို မြေအောက်ခန်းတွင် ချည်နှောင်ခဲ့သည်။ Likens မိန်းကလေးနှစ်ဦးစလုံးသည် ယခုအခါ ထိတ်လန့်ကြောက်ရွံ့နေကြပြီး ၎င်းတို့ရရှိနေသည့် ညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်မှုကို မည်သို့ရပ်တန့်ရမည်ကို မသိရှိခဲ့ကြပေ။ Slyvia သည် မြေအောက်ခန်းတွင် အဝတ်မပါဘဲ ချည်နှောင်ထားသဖြင့် Gertrude သည် ဖုတ်ကောင်ဖြစ်နေသော၊ အာဟာရချို့တဲ့သော Slyvia ကိုကြည့်ရန် အနီးနားရှိ ကလေးများနှင့် Paula ၏သူငယ်ချင်းများအား နီကယ်အား စတင်ဖြည့်သွင်းခဲ့သည်။
Baniszewski ညီအစ်မနှစ်ယောက်စလုံးဟာ သူတို့ရဲ့ ချစ်သူတွေ၊ အိမ်နီးနားချင်းတွေနဲ့အတူ Slyvia ကို မီးခြစ်နဲ့ စီးကရက်တွေနဲ့ မီးရှို့ခဲ့ကြပါတယ်။ ဆူပွက်နေသောရေကို လောင်းချပြီး နိုင်ငံခြားပစ္စည်းများဖြင့် အဓမ္မပြုကျင့်ကြသည်။ ကလေးများသည် Slyvia ၏ဗိုက်တစ်ဝိုက်တွင် 'ငါသည် ပြည့်တန်ဆာဖြစ်သည်' ဟူသော စကားလုံးကို ထွင်းထုရန် ပူနွေးသောဖဲချပ်ကို အသုံးပြု၍ Jenny သည် တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်သွားခဲ့သည်။ တစ်ခါက ဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ မိန်းကလေးကို သူတို့ရဲ့ မစင်တွေကို ကျွေးတယ်လို့ သတင်းပို့တယ်။ အောက်တိုဘာလ 25 ရက်နေ့တွင် Gertrude သည်သူမ၏ချည်နှောင်ခြင်းကိုပြောင်းလဲနေစဉ် Slyvia သည်လွတ်မြောက်ရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း သူမအောင်မြင်ခဲ့ပြီး Gertrude က သူ့ကို အိမ်နောက်ဖေးသို့ မလိုက်မီတွင် ဖမ်းမိခဲ့သည်။ ထို့နောက်တွင် မစ္စ Baniszewski သည် Slyvia ကို ရေနွေးပူပူဖြင့် ရေချိုးခိုင်းပြီး သူမကို အကြိမ်ကြိမ် ရိုက်သည်။ နောက်တစ်နေ့တွင် Slyvia သည် ပါးနပ်စွာ စကားမပြောနိုင်ဘဲ သူမ၏ လက်နှင့် ခြေထောက်များ လှုပ်ရှားသွားခဲ့သည်။
အသက် 16 နှစ်တွင် Slyvia Likens သည် ဦးနှောက်သွေးယိုစီးမှုနှင့် အာဟာရချို့တဲ့မှုကြောင့် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။
ယခုအခါတွင် လူသေအလောင်းတစ်လောင်းကို ပိုင်ဆိုင်ထားသူ Gertrude Baniszewski သည် သူမအား ရဲခေါ်ရမည်ဟု သဘောပေါက်ခဲ့သည်။ Slyvia သည် အခင်းဖြစ်ပွားရာနေရာသို့ ရောက်ရှိလာပြီး ယောက်ျားလေးတစ်စုနှင့်အတူ ထွက်ပြေးသွားကြောင်းနှင့် ကောင်မလေး ပြုတ်ကျချိန်တွင် ပြန်ပေးခဲ့ကြောင်း အာဏာပိုင်များက ပြောကြားခဲ့သည်။ သို့သော်လည်း Jenny Likens သည် အရာရှိတစ်ဦးအား “ငါ့ကို ဒီနေရာကနေ ဖယ်လိုက်ပါ။ တကယ်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တာကို ငါပြောပြမယ်။"
နောက်တစ်နေ့တွင် Gertrude Baniszewski၊ သူမ၏သား John Baniszewski၊ သူမ၏သမီး Paula နှင့် Stephanie၊ Coy Hubbard နှင့် သူ၏အစ်ကို Richard တို့ကို လူသတ်မှုဖြင့် ဖမ်းဆီးခံခဲ့ရသည်။ ရပ်ကွက်အတွင်း ကလေးငါးဦးဖြစ်သည့် Randy Lepper၊ Michael Monroe၊ Darlene McGuire၊ Judy Duke နှင့် Ann Siscoe တို့ကို အောက်တိုဘာ ၂၉ ရက်က ဖမ်းဆီးခဲ့သည်။ နောက်ပိုင်းတွင် ၎င်းတို့အား ၎င်းတို့၏ မိဘအုပ်ထိန်းမှုတွင် ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့ပြီး တရားရုံးတွင် ထွက်ဆိုရန် ဆင့်ခေါ်ခဲ့သည်။
ပြုပြင်ပြောင်းလဲရေးကျောင်းမှာ နှစ်နှစ်လုပ်တယ်။ 1966 ခုနှစ် မေလတွင် Gertrude၊ Paula၊ John နှင့် Stephanie တို့သည် Slyvia Likens ကို သတ်ဖြတ်ရန် လှုံ့ဆော်မှုဖြင့် လျစ်လျူရှုမှုဖြင့် ပြစ်ဒဏ်ချမှတ်ခံခဲ့ရသည်။ Gertrude သည် 1985 ခုနှစ်တွင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဖြင့် လွတ်မြောက်ခဲ့သော်လည်း 1990 ခုနှစ်တွင် သေဆုံးသွားခဲ့သည်။ Paula သည် ဒုတိယအဆင့် လူသတ်မှုဖြင့် အပြစ်ရှိကြောင်း တွေ့ရှိခဲ့ပြီး 1972 ခုနှစ်တွင် လွတ်မြောက်ခဲ့သည်။ John Baniszewski၊ Stephanie Baniszewski၊ Hubbard တို့နှင့်အတူ လူသတ်မှုအတွက် နှစ်နှစ်သာ ကျခံခဲ့သည်။ 1968 တွင် လွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်မခံရမီ။
ဤရွံရှာဖွယ်အမှုသည် အင်ဒီယားနားတွင် ပိုမိုတင်းကျပ်သော ကလေးသူငယ်အလွဲသုံးစားပြုမှုဥပဒေများကို စတင်ဖြစ်ပေါ်စေခဲ့ပြီး ၎င်းတို့၏ပြည်နယ်သမိုင်းတွင် အဆိုးဆုံးရာဇ၀တ်မှုအဖြစ် သတ်မှတ်ခံရသည်။ Stephen King က "Henry: Portrait ofaSerial Killer နောက်ပိုင်း ပထမဆုံး စစ်မှန်တဲ့ အမေရိကန်ရုပ်ရှင်" လို့ ဂုဏ်ပြုထားတဲ့ ဒီဇာတ်ကားကို Netflix၊ Vudu၊ Prime နဲ့ Apple TV တို့မှာ ရနိုင်ပါတယ်။
ဒီဇာတ်ကားငါးကားကို သင်သာ လွတ်မြောက်ခဲ့ရင် ဘယ်ကားက သင့်ကို အကြောက်ဆုံးလဲ။ ကျွန်ုပ်တို့ပတ်ဝန်းကျင်ရှိ မကာဘရီပန်းများပွင့်နေသမျှ ထိတ်လန့်ဖွယ်ရာရုပ်ရှင်ရုံများတွင် အမြဲတမ်းအမြစ်များရှိနေမည်ဖြစ်သည်။ ဒီဥယျာဉ်ကို လှည့်လည်သွားလာတဲ့အခါ သတိထားရမယ်။ သင့်ခြေထောက်ကို သတိရပါ၊ အမည်မသိလမ်းများကို ရှောင်ပြီး သင့်အိမ်နီးနားချင်းများကို သိပါ။